သန်းထိုက်ဇော် : Myanmar Mobile Software Developer
Recovery Mode ထည့်နည်းများ
Unlock Bootloader လုပ်နည်းများ
Internet Setting ချိန်နည်း……
Cydia Tweaks (For JailBreak iOS Devices)
I OS Firmware များ
I OS Tool
I OS App
I OS Game
Mobile Driver များ
Author Archive: သန်းထိုက်ဇော်
DX Home(up date)
DX Home(up date) လေးတွေ.လို.တင်ပေးလိုက်ပါတယ် တော်တော်မိုက်လာပါတယ် ဒီဇိုင်းကတော.ဆန်းဆန်းလေးပေါ. :p စက်လည်းမလေးပါဘူးး ownload link 1https://www.dropbox.com/s/1ecg1ahq8j4cgk4/DX%20home%20new.apk download link2http://d-h.st/w6F
City Jump(up date)
အားလုံးကြိုက်တဲ. city jump update လေးထွက်လို.တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာယူကျနော် download link http://d-h.st/fa1 Read More
February 22, 2013 |2Replies
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အခုမှစသုံးတဲ့လူတွေရော သုံးတာကြာတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ အသေချာချာ ရေးပြထားပါတယ် ။အကောင့်တစ်ခု စတင်ပြုလုပ်သည်မှစပီး အကုန် လုံခြုံစွာသုံးတတ်ရေး အကောင့်အခိုးမခံရအောင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် နည်းတွေနဲ့ချက်တင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သူငယ်ချင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အစုံအလင် ရေးပြထားတာမို့လက်ရှိ သုံးနေတဲ့သူများ အကောင့်ခဏခဏ ပျောက်သူများ ဖတ်သင်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေသူများ Block လုပ်နည်းနဲ့ကိုယ့်စာမျက်နှာမှာ ညစ်ညမ်းပုံတွေ မလိုအပ်တဲ့စာတွေ လာရောက်နှောက်ယှက် မရေးနိုင်အောင် ပိတ်ထားနည်းတွေ အပြည့်အစုံရှင်းထားတာမို့Facebook သုံးသူတွေအတွက် ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ပါ ဒီလင့်မှာ Downliad ယူ – http://www.mediafire.com/?7be2jnujyq5u24q credit to မောင်စွယ်စုံကျမ်း Read More
မိမိရဲ. android dievesကို font လှလှလေးတွေပြောင်းသုံးကြမယ်
အခုတလော ဖောင်.လှလှလေးတွေသုံးချင်တယ်ပြောကြတယ် fontchangerနဲ.ကျတချို.ဖုန်းတွေအဆင်မပြေဘူးးလေ ဒါကြောင်.ဒါလေးတင်ပေးလိုက်ပါထှယ် မိမိရဲ. android dievesကို font လှလှလေးတွေပြောင်းသုံးကြမယ်ဟေးး မိုက်တယ်နော် ဖောင်.လှလှလေးတွေဗျ တော်တော်မိုက်တယ် root လုပ်ထားတာနဲ.သုံးလို.ရပါတယ် MMUCကထုတ်ထားတာဗျ မိုက်ထှယ်ဗျ screen shotလေးတွေကြည်.ဦးဗျာာ အနော်အကြိုက်ဆုံးကတော. deadnote font နဲ. ရောမ fontပေါ. ဒီဖြင်.ဖောင်.တွေလည်းပါသေးတယ်နော် အရမ်းမိုက်ထှယ် ဖောင်. changerလည်းမလိုပါဘူးး oneclick ပါ download http://d-h.st/Cnj
DX Launcher နဲ. DX THEMEလေးတွေပါ
ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ပါတယ် DX HOMEပေါ.ဗျာာ သူ.themeလေးတွေနဲ lockscreen လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် မိုက်တယ်နော် စမ်းသုံးကြည်.. themeတွေ.တော. 22ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကောင်းမကောင်းစမ်းသုံးကြည်.ကြပါဦး screen shotလေးတွေတော.ပြထားတယ် dxhome ဒေါင်းရန် http://d-h.st/3lN dxlockscreen ဒေါင်းရန် http://d-h.st/3Is DX THEMEများး 1း http://d-h.st/Dox 2းhttp://d-h.st/S9w 3း http://d-h.st/lo6 4း http://d-h.st/uSz 5းhttp://d-h.st/IFE 6:http://d-h.st/ZQW 7:http://d-h.st/CRZ 8:http://d-h.st/TUb 9:http://d-h.st/V5z 10:http://d-h.st/woj 11:http://d-h.st/eL4 12:http://d-h.st/XST 13:http://d-h.st/w7H 14:http://d-h.st/GkB 15:http://d-h.st/2I1 16:http://d-h.st/DuI 17:http://d-h.st/0JU 18:http://d-h.st/t3I 19:http://d-h.st/EmU 20:http://d-h.st/OHQ 21:http://d-h.st/dTS 22:http://d-h.st/ns0
facebook version 2.2 လေးပါ
February 15, 2013 |2Replies
ဖေ.ဘုတ်က android တွေအတွက် facebook version 2.2 လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပီခင်ဗျာာာ ညကမှရတာဗျ ဒေါင်းပြီးသုံးကြည်.ကြ ကျွန်တော်တော.အသေကြိုက်တယ် ကြိုက်ဆို မိုက်လည်းမိုင်ထှာကိုး ဒေါင်းပြီးသုံးကြည်.ကြိdownload http://d-h.st/CR4 Read More
android window ( update )
February 13, 2013 | 8 Replies
android window update လေးတွေ.လို.တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဟိုနေ.ကလည်းတထုတင်တယ်နော် အဲဟာထက်ဗားရှင်းပိုမြင်.ပါတယ် မိုက်လည်းမိုက်တယ် သုံးရတာလည်းကောင်းတယ် ပေါ.ပေါ.လည်းပေါ.တယ် စက်မလေးဘူးးဗျ screen shot လေးတွေကြည်.ပီးမှဒေါင်းကြပေါ..ဗျ မိုက်မမိုက်တော.ဒေါင်းပီးသုံးကြည်.ကြ downloaad link httpshttps://www.dropbox.com/s/4hae2w9z4eis1fo/AndroidWindows7.apk
god of war ကို android မှာဆော.ကြမယ်
February 12, 2013 | 15 Replies
god of war ဂိမ်းကို PS2 Ps3 ဆော.ဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပေါ့… မိုက်တယ်နော် ကိုအောင်မင်းဟန်မတင် ခင်အမြန်တင်မှ စိတ်စောသွားလို.. Dropboxကပဲတင်ပေးလိုက်တယ် စိတ်အချိုးနဲ.နော် ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော .တော်တော်ကြီးတယ်နော် ဆော.လို.တော.ကောင်းတယ်ဗျာာာာ ဆွဲထားဦးး ဒီလင်ခ်.ကအသစ်ပါဗျ download link https: https://www.dropbox.com/s/emb5v3u3zexeadm/god%20of%20war%20.apk Read More
Award Keylogger Pro 3.0 (x86/x64) With Activation
February 12, 2013 | 1 Reply
အရမ်းမိုက်တဲ.ဆော.၀ဲလေးပါ ကွန်ပြူတာအတွက်ပါ ရိုက်သမျှစာတွေကိုလိုက်မှတ်ပေးတဲ့ Award Keylogger Pro 3.0 (x86/x64) With Activation keylogger ဆိုရင်တစ်ချို့လူတွေသိကြမယ်ထင်ပါတယ် အင်တာနက်ဆိုင်မှာသတိထားရမယ် software ပါ။ မိမိရိုက်တဲ့စာတွေမှန်သမျှကိုမှတ်ထားတဲ့ software ပါ။ အခြား Features တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ DOWNLOAD HEREdropbox https://www.dropbox.com/s/zmni3pxz7h4n449/keylogeronekokoaung.blogspot.com.rar credit မောင်စွယ်စုံကျမ်း
အသုံးပြုနည်းကတော့ …. 1. Google Talk ကိုဖွင့်ပါ။ 2. ကိုယ်ဆက်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပုံမှန် gtalk address တွေကို Add သလိုပဲ add လုပ်ပါ။ 3. အဲလိုရိုက်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံကုဒ်၊ ဒေသကုဒ်တွေကို ပါထည့်ပေးရပါမယ်။ gmail.com နေရာမှာ talkster.gtalk2voip.com ကို ပြင်ဆင်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ([email protected]) ဥပမာ: for UK, use [email protected] or for USA , use [email protected] 4.Talkster မှ ပေးပို့တဲ့ confirmation ကို instructions တွေနဲ့ အတူ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တဘက်မှ သင်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့သူသုံးဖို့ local Talkster number တစ်ခုကို ရရှိလာမှာ […]
Like Us On Facebook! Myanmar Calendar
© 2014 Myanmar Mobile Software Developer. All rights reserved. .